Green ray: kedu ihe ọ bụ, njirimara, otu esi ahụ ya na akụkọ ifo | Network Meteorology
Gburugburu anyị juputara n'ihe omimi sayensị nwere idozi. Odi nkpa imata omume nke ikuku iji mara n’ezie ihe n’eme tupu imeputa ihe obula. Otu n'ime ihe omimi nke ikuku emeela ka akụkọ banyere akụkọ a acha ndụ ndụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ ka kwenyere na ọ bụghị eziokwu, kama ọ bụ nsonazụ nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri, enwere ọnọdụ ụfọdụ ga-ahụ ya.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụcha ndụ ndụ, anyị ga-achọpụta ihe omimi nke ọ gụnyere.
1 Gịnị bụ ndụ ndụ
2 Ọhụụ Green ray
4 You nwere ike ịhụ ya na ọnwa?
Gịnị bụ ndụ ndụ
Otu n’ime ihe ndị kacha emetụ n’ụwa gbasara ikuku bụ ihe na-acha akwụkwọ ndụ. Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na ọ bụghị eziokwu, kama ọ bụ nsonazụ nke ndị ọkwọ ụgbọ mmiri bụ ndị kwupụtara na ha ahụla na njem. Njirimara ya na-enweghị isi na-abụkarị n'ihi ọnọdụ pụrụ iche nke a ga - ezute iji hụ ya, nke pụtara na ọtụtụ ndị enwetabeghị ya n'agbanyeghị na ha hụrụla ọtụtụ ọdịda anyanwụ na ọwụwa anyanwụ. Ọ bụrụ na ikuku dị jụụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọgba aghara nke ikuku adịghị, anyị dịkwa elu, ọkacha mma n'ihu oke osimiri, enwere ike ịnweta ọnọdụ kachasị mma iji lelee ya.
Ekwuola ọtụtụ ihe banyere ụcha ndụ ndụ, ebe ọ bụ na onye ọ bụla nke hụrụ ya n'oge ahụ nwere ikike ịgụ echiche nke ndị soro ya. Nkwenkwe ndị gbanyesiri mkpọrọgwụ ike bụ ndị na-ekwu maka ịhụnanya. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị na-ekwu na onye na-ahụ ihe na-acha ndụ ndụ mgbe anyanwụ dara bụ ezigbo onye hụrụ n'anya, ma ọ bụ ọ bụrụ na di na nwunye na-ahụ ihe a na-eme n'otu oge, ha ga-ahụ ibe ha n'anya n'oge ndụ ha niile. Akụkọ akụkọ ikpeazụ a kesara na Scotland na etiti narị afọ nke XNUMX mgbe ọ bịarutere onye France na-ede akwụkwọ akụkọ bụ Jules Verne, bụ onye gara mba ahụ tupu ọ bụrụ onye ọdee akwụkwọ a ma ama n'ụwa, jidere ma ọtụtụ afọ gachara dee akwụkwọ ọgụgụ ama.
Ọhụụ Green ray
Ihe isi ike na ikiri ihe omimi anya na ala Scottish na-eduzi agwa site na ihe omimi di iche iche iji nweta ihe mgbaru ọsọ kachasi. Umu akwukwo abuo nke ndi Scotland nwere nwanne ha nwoke. Otu nwa okorobịa na-enweghị nna aha ya bụ Elena Campbell tụrụ aro ka ọ lụọ ọmarịcha ọkà mmụta sayensị aha ya bụ Aristobulus Ucikras. Ọ maghị ma ọ hụrụ ya n'anya, ya mere ọ hapụrụ nwanne nna ya ka ọ kpọba ya ka ọ nwaa ray ray, n'ihi na mgbe ahụ A ga-ewepụ obi abụọ gị ma ị mara ma ị nwere ezi ịhụnanya maka ya. Ikwesiri iguta na njedebe nke akwukwo iji chọta azịza ya.
Kemgbe e bipụtara akwụkwọ a bụ "Green Ray", ihe ngosi ikuku a pụrụ iche emeela ka ọtụtụ ndị na-agụ ya nwee mmasị, gụnyere ụfọdụ ndị sayensị ndị na-ahụ maka ịkọwa ihe omimi ya na ikpughere anụ ahụ kpatara ya. Site na echiche nkọwa, ọ nwere ihe ọkụkụ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ - ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ na-ewere ihe na-acha anụnụ anụnụ - naanị otu ma ọ bụ sekọnd abụọ ogologo, na-esi na nsọtụ elu nke anyanwụ, diski ọnwa ma ọ bụ mbara ala, na-abịaru nso. Ozugbo sekọnd ndị ahụ dịruru, ọ ga-apụ n'anya ọzọ.
Ikuku ga-adị jụụ, na nke a oyi akwa ikuku dị nso na mbara igwe dị ka prism, nke na-akpata nkewa nke agba na-etolite ọcha ọcha nke kpakpando. N’ebe dị elu n’elu mbara igwe, etiti dị n’etiti diski agba dị obere pere mpe, anyị enweghị ike ịmata ya, mana n’ezie, diski uhie dị nso na mbara igwe karịa acha odo odo. Dị ka kpakpando na-eru nso na mmiri na-bịara ikiri, nkewa nke ndị a monochromatic discs na-abawanye. N’etiti diski ahụ, agba niile ga-emepụtagharị ọkụ ọcha, mana n’elu ọnụ violet na diski acha anụnụ anụnụ na-apụta ntakịrị.
N'ihi na agba ndị a dakọtara na agba dị iche iche nke elu igwe, mgbe kpakpando gbadata ntakịrị, agba nke ruru anya anyị bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke bụ agba na-esote na ụdịdị a na-ahụ anya. Akụkọ ọdịnala ha n'akụkụ, ndị nwere ihu ọma iji hụ flash nke emerald nwere ike ijide n'aka na ha ga-adọta nwa oge ma nwee mmasị.
Osisi na-acha akwụkwọ ndụ bụ ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke enwere ike ịhụ na sekọnd ma ọ bụ abụọ mgbe anyanwụ dara ma ọ bụ anyanwụ amalite ịrị elu, a ga-ahụ ya ozugbo na ọnọdụ anyanwụ. Typedị ihe a gbasara ihu igwe dị mfe ileba anya na ikuku doro anya na ọkụ nwere ike iru onye na-ekiri ya ozugbo na-agbasaghị.
Nke a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke a na-ahụ dị ka ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ, na-emepụta site na nchapu ọkụ ka ọ na-agabiga na mbara igwe. Ọ na-apụta na ìhè n’ugwu dị ala na-eji nwayọ nwayọ n’ihi na ikuku sara mbara karịa ikuku dị n’elu elu. Rayszarị anyanwụ ndị a nwere mkpụgharị na-agagharị agagharị iji soro curvature nke ụwa. Igwe ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ na -acha akwụkwọ ndụ dị elu nwere oke currant karịa ọkụ na-adịghị ala nke na-egosipụta uhie na oroma. Ya mere, ụzarị anyanwụ na-acha anụnụ anụnụ na nke na-acha anụnụ anụnụ dị na akwa elu nke anyanwụ, a na-ahụkwa ya na mbara igwe ruo ogologo oge, ebe n'aka nke ọzọ, a na-ahụ ụzarị ọkụ anyanwụ dị obere na uhie na oroma ma kpuchie ya mmiri.
You nwere ike ịhụ ya na ọnwa?
Mgbe anwụ na-ada, ọ bụ ihe ọhụrụ ịhụ glints na-acha akwụkwọ ndụ na Sun. Anyị maara nke a bụ n'ihi ihe ngosi ihu igwe a na-ahụ anya nke akpọrọ green ray. Nke a na onu eme nso Ihe na-egbuke egbuke nke mbara igwe dị ka anyanwụ, ọnwa, Jupiter, Venus, wdg. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhụ ihe ịtụnanya a mgbe anyanwụ dara. O siri ike ịhụ ya mgbe ọnwa bidoro ya.
Agbanyeghị, na Chile, Gerhard Hüdepohl, onye injinia na-ese foto, nwere ike wepụta onyonyo sitere na satellit terrestrial na, site na gburugburu European Southern Observatory (ESO) na Ugwu Paranal, o were onyoonyo nke ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ na nsọtụ elu nke ọnwa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere ndụ ndụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Green undergbè Eluigwe
Kedu ka esi eme mmiri ozuzo acid